Puntland oo xabsiga dhigtay ajinebi ku eedaysan Khayraad arruursi iyo falal basaasnimo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2013 10:22 b 0
Garoowe, November 18, 2013 – Dowladda Puntland ayaa galabta shaacisay in ay qabteen labba nin oo u kala dhashay dalalka Britian iyo Faransiiska, kuwaas oo lagu eedeyey in ay howlo sirdoonnimo ah ka bilaabeen ?Puntland horaantii sanadkan.
Puntland waxaa ay sheegtay in raggaan ay ku soo galeen howlo shaqo iyo in ay ka tirsan yihiin ururo gargaar, balse waxaa baaris dheer kadib la oggaaday in arruusanayeen khayraadka dabiiciga ah iyo weliba iyagoo samaystay shabakad ka dhan ah ciidamada amaanka oo sirdoon.
?Bishaan 14-keeda ayaa si toos ah loo soo qabtay iyagoo gacanta kula jira falkii ay ku eedeysnaayeen, waxaana lagu hayaa Garoowe baaristuna waa sii soconaysaa.? Ayuu yiri wasiirka amniga Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan oo shir jaraa?id galabta ku qabtay Garoowe.
Wasiirka amniga ee Puntland waxaa uu sheegay in dhowaan ay si rasmi ah u shaacin doonaan eedeymaha loo haysto ragga la qabtay ee ka yimi dalalka reer galbeedka.
?Puntland markay yimaadeen waxay sheegeen in ay ka shaqaynayaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin tababarada ciidamada oo ay dowladda ka caawinnayaan.? Ayuu yiri wasiirka amniga Col. Khaliif Ciise oo ka jawaabay su?aal ay saxaafadu weydiisay.
Wasaaradda amniga ee Puntland waxaa ay sheegtay in ay jiraan dad Soomaali ah oo ka dambeeyey qorshaha ay dalka ku soo galeen nimanka u dhashay dalalka farance iyo Ingiriiska, Col. Mudan ayaa ka gaabsaday in uu ka warbixyo tirada dadka Soomaalida ah ee howl-galka u xiran.
Dhegeyso: wasiirka Amniga khaliif ciise mudan oo saxaafadu su?aala weydiinayso